के तपाईको साइट क्रल गर्दै खोज इन्जिनबाट थकित हुनुहुन्छ? - तिनीहरूलाई Semalt संग रोक्नुहोस्!
खोज इन्जिनहरू लगभग हरेक दिन उनीहरूको एल्गोरिदम परिवर्तन गर्छन् र यी परिवर्तनहरू सधैं वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूका लागि राम्रो हुँदैनन्। त्यहाँ सधैँ एक मौका छ कि तपाइँको वेबसाइट अपडेट खोज इन्जिन नीतिहरूको कारणले प्रतिबन्धित हुनेछ। यसको माथि, उनीहरूको भू-विशिष्ट खोजी नतिजाहरू र व्यक्तिगतकरणलाई सम्भावित हुने सम्भव छ। गुगल, बिंग, र याहू खोज नतिजाहरु बाट धेरै वेबसाइटहरू ब्लक गर्न राम्रो छ ताकि तपाईका वेब पृष्ठहरू सजिलै देखाउँछन्। ग्राहक सफलता प्रबंधक सेल्टल्ट , जेसन एडलर भन्छन्, धन्यबाद, केहि नतिजाहरू खोज परिणामबाट निश्चित वेबसाइटहरू रोक्नका लागि छन्। तिनीहरूमध्ये केही छलफल गरिएका छन्।
1। व्यक्तिगत वेबसाइट ब्लकलिस्ट:
तपाईंको Google क्रोममा व्यक्तिगत वेबसाइट ब्लकलिस्टहरू सिर्जना गर्दै एबीसीको रूपमा सजिलो छ। यसको लागि, तपाईंले Google एक्सटेन्सन स्थापना गर्नु पर्छ; एक पटक यो स्थापना भएपछि, तपाइँ साइटहरू वा URL हरू रोक्न सक्ने विकल्प देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई प्रायः कष्टित पार्दछ र Google खोजी नतिजामा तपाईको साइटलाई पछि बढाउनुहोस्। जब तपाइँ ब्लक विकल्पमा क्लिक गर्नुभएपछि ती वेबसाइटहरू Google खोज नतिजाहरू तुरुन्तै हराउनेछन्। तपाईले सम्झनु भएको छ कि यी साइटहरू याहू र बिंगको खोज नतिजाहरूमा देखा पर्दछ, जसको अर्थ तपाईले यो प्रविधि प्रयोग गरेर अन्य खोज इञ्जिनबाट ब्लक गर्न सक्नुहुन्न।
जस्ता खोजी इञ्जिनबाट हालको होस्ट रोक्नुहोस्।
Google बाट वर्तमान होस्ट रोक्न सजिलो छ।.com। यदि तपाईंसँग Google Chrome को सेटिङ् खण्ड खुला छ भने, तपाईं ब्लक आईट बटनमा क्लिक गरेर संदिग्ध वा वयस्क वेबसाइटहरूलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईं शो विकल्पमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, त्यहि वेबसाइटहरू तपाईंको Google खोजी नतिजाहरूमा पुन: प्रकट हुनेछ।
यदि तपाईँले भर्खरै ब्लक गरिएका साइटहरूको सूचीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई उपकरणपट्टीको ब्लकसूची आइकनमा क्लिक गर्न आवश्यक छ। यो सामान्यतया नारंगी रंगमा देखिन्छ र एक हात आइकन छ।
3। Webspam रिपोर्ट प्लगइन:
माथिको दुईवटा पद्धतिहरूको अलावा, Webspam रिपोर्ट प्लगइनसँग पनि जान राम्रो छ। यसले तपाईंलाई संदिग्ध र वयस्क वेबसाइटहरूलाई स्प्यामको रूपमा रिपोर्ट गर्न दिन्छ। वास्तवमा, यो सजिलो र उत्तम विकल्प हो किनकि तपाईं सकेसम्म धेरै वेबसाइटहरू र ब्लगहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि स्प्याम रिपोर्टहरू गुगलमा पठाइएको छ भने, खोजी इन्जिन अन्ततः दण्डित गर्नेछ र यसको परिणामबाट साइट ब्लक गर्नेछ।
यो एक्स्टेन्सनको साथ, तपाइँ Google खोज इञ्जिनबाट सबै अवांछित र संदिग्ध परिणामहरू ब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। दुर्भाग्यवश, यो प्लगइनले सफारी र अन्य वेब ब्राउजरहरूसँग राम्रो काम गर्दैन। यसको अर्थ तपाईं Google क्रोम मार्फत वेबसाइट सर्फ गर्दा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यस ब्राउजरलाई प्राथमिक विकल्पको रूपमा लिनु हुन्छ।
4। फायरफक्स प्रयोगकर्ताहरूको लागि:
यदि तपाईं फायरफक्स प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यस्ता add-ons स्थापना गर्न सम्भव छ जुन सबै अनावश्यक साइटहरू खोज परिणामहरूबाट ब्लक गर्नेछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग एक वर्डप्रेस साइट छ भने, तपाइँ प्लगइन जाँच्न सक्नुहुनेछ जसले फायरफक्स खोजी परिणामबाट अवांछित साइटहरूलाई ब्लक गर्न मद्दत गर्दछ। एकपटक पूर्ण रूपमा स्थापना भएपछि, तपाइँ प्लगइन सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र साइटहरू र ब्लकहरू मेटाउन वा मेटाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो Google खोजी नतिजाहरूमा देखाउन चाहनुहुन्न।
यी सबै विधिहरू सबै प्रकारको वेबसाईटहरू, ब्लगहरू, र सोशल मिडिया पानाहरूका लागि अनुगमन र प्रभावकारी बनाउन सजिलो छ।